हिमाल खबरपत्रिका | नेता बन्ने बाटो
तराईका गाउँमा ‘नेताजी’ भनेर सम्बोधन गरिने व्यक्ति बग्रेल्ती भेटिन्छन् । प्रत्येक वडा वा टोलमा दुई–चार जना यस्ता व्यक्ति भेटिन्छन्, जसलाई तिनका ‘लाभार्थी’ हरूले ‘नेताजी’ सम्बोधन गर्छन् । सर्वसाधारणको मस्तिष्कमा नेता भन्ने बित्तिकै कस्तो विम्ब आउँछ ? कस्तो व्यक्ति आममान्छेबाट ‘नेताजी’ मा रूपान्तरित हुन्छ ? यी प्रश्नको खोजीनिती गर्दा रोचक तथ्य फेलापरे ।